GameMaker Studio 2: IDE loogu talagalay Ciyaaraha 2D Hadda Loo Heli Karo Linux | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan si joogta ah u wargelinaa / sahaminaa ciyaaraha GNU / Linux, iyo waqtiyo kale waxaan caadiyan ogeysiinaa / sahaminaa xalalka softiweerka si aan u abuurno ciyaaro. Fursadan, waxaan sii wadi doonaa tan labaad iyo gaar ahaan ku saabsan "GameMaker Studio".
"GameMaker Studio" waa mid qiimo leh oo adag Ciyaaryahanka IDE 2D, oo hadda loo adeegsan karo gudaha GNU / Linux, sababtuna tahay bilaabista a Nooca Beta en .deb qaab, taas oo ka dhigaysa mid xiiso leh in la soo dejiyo oo la tijaabiyo.
BennuGD: Luqad Barnaamijeedka Ciyaaraha Isboortiga
1 Beddelka bilaashka ah oo furan ee GameMaker
1.2 Mashiinka Godot
1.3 Sare 5: Kuwa kale oo lacag la'aan ah, furan oo lacag la'aan ah
2 Studio -ga GameMaker: IDE horumarsan oo loogu talagalay abuurista ciyaaraha 2D
2.1 Waa maxay GameMaker Studio?
2.3 Maxaa ku cusub nooca cusub ee Beta ee Linux
2.4 Wax badan oo ku saabsan GameMaker
Beddelka bilaashka ah oo furan ee GameMaker
Marka la eego, "GameMaker Studio" Ma aha bilaash ama furan, marka hore qaar baan xusi doonaa xal farsamo oo lacag la'aan ah oo furan aaggan oo leh xiriirkooda kala duwan ee websaydhkooda rasmiga ah, si aan dhammaanteen si fiican ugu wargalino beddelka jira laga heli karaa GNU / Linux.
“BennuGD waa luuqad lagu horumariyo ciyaarta fiidiyaha il furan, oo leh fikrad qaabaysan oo loo malaynayo inay fududeynayso qaadista mashaariicda laga fuliyay, taasoo ka dhigaysa luqaddan midda ugu fiican. BennuGD kaliya wuxuu si rasmi ah u taageeraa Windows, Linux iyo GP2X Wiz, laakiin waxaa loo gudbiyay aalado kale, oo ay ku jiraan * BSD, Mac OSX, Android, iOS, Wii (Homebrew), Dingoo A320, GP2X, GP32, PS2 (Homebrew) ama kii ugu horreeyay Xbox (Homebrew). Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa xalal fudud oo loogu talagalay hawlgallada dhawaaqa iyo garaafyada. In kasta oo aysan u fududayn GameMaker, haddana maaha mid xaddidan sida tan. ”
"Mashiinka Godot waa il furan iyo codsi dhinacyo badan leh, kaas oo leh astaamo horumarsan oo loogu talagalay horumarinta ciyaaraha 2D iyo 3D. Godot Engine wuxuu isu keenaa qalab taxane ah oo xoog badan oo ku takhasusay abuurista cayaaraha, kaas oo na siinaya fursad aan ku abuuri karno Linux iyada oo aan loo baahnayn inaan dib u cusboonaysiiyo giraangiraha. Lambarka isha Godot Engine waa la arki karaa oo waa la qarin karaa Halkan, waxaa lagu bixiyaa iyada oo la raacayo shuruudaha oggolaanshaha ee Shatiga MIT. Intaa waxaa dheer, gabi ahaanba waa bilaash oo uma baahnid nooc kasta oo royalties ah."
Godot 4.0: mashiinka muuqaalka furan ee muuqaalka ayaa sii socda
Sare 5: Kuwa kale oo lacag la'aan ah, furan oo lacag la'aan ah
Studio Ciyaaraha Ciyaaraha
Studio -ga GameMaker: IDE horumarsan oo loogu talagalay abuurista ciyaaraha 2D
Waa maxay GameMaker Studio?
Sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee "Studio -hayaha Ciyaaraha" waxaa si kooban loogu tilmaamay:
"Jawi horumarsan oo loogu talagalay horumarinta ciyaarta 2D."
In kasta oo, goor dambe ay si faahfaahsan uga hadlaan waxyaabaha soo socda:
"GameMaker Studio 2 waa jawi horumarineed oo dhammaystiran oo loogu talagalay abuurista ciyaaraha. Waxaa ku jira qalab dhammaystiran oo kuu oggolaanaya inaad u abuurto ciyaaro Windows, Mac, Linux, Android, iOS, HTML5, Xbox, PlayStation iyo Nintendo Switch. Waa sida ugu dhaqsaha badan ee loo abuuro loona dhoofiyo ciyaar meel kasta."
Waxaa ka mid ah astaamaha guud ama shaqooyinka hadda jira, kuwa soo socda ayaa la iftiimin karaa:
Waxay awood u siineysaa socodka shaqada ee isku-dhafan: Tan iyo, waxay u oggolaaneysaa in lagu horumariyo cayaaraha Windows, MacOS iyo hadda Linux. Sidoo kale, waxay u oggolaaneysaa in la dhoofiyo cayaaraha si toos ah loogu abuuray desktop -ka Windows, MacOS, Ubuntu, Android, iOS, tvOS, fireTV, TV -ga Android, Microsoft UWP, HTML5, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One iyo Xbox Series X | S.
Wuxuu sahlaa abuurista ciyaaraha: Waad ku mahadsan tahay teknolojiyaddeeda loo yaqaan Jiid iyo Hoos (DnD ™), taas oo asal ahaan kuu oggolaaneysa inaad abuurto ciyaaro leh jiidis iyo hoos u dhigga walxaha koodhka si aadan u yeelan inaad sameysato koodh kasta. In kasta oo, ay u oggolaanayso mid ka mid ah luqadda barnaamijyada lahaanshaha ee loo yaqaan GML oo ku saleysan luqadda barnaamijka C.
Waxay leedahay tifaftiraha qolka aad u fiican: Kaas oo bixiya aalado naqshad wanaagsan leh iyo kontaroolada kaamerada, waxyaabo badan, tusaale ahaan, awood u lahaanshaha in lagu dalbado alaabta masraxa gudaheeda oo si toos ah loo sawiro "kuwa istiqfaarta" iyadoon loo baahnayn shay.
Si aad u ballaariso aqoontaada sifooyinkeeda, waad booqan kartaa tan isku xirka.
Maxaa ku cusub nooca cusub ee Beta ee Linux
Inta uu nooca hadda deggan diyaar u ah Windows iyo MacOS ayaa maraya lambarka 2.3.3, ka nooca beta ee hadda jira diyaar u ah Linux wuxuu la yimaadaa faylka lambarka 2.3.4. Soo -saareyaasheedu waxay soo sheegaan waxyaabaha soo socda ee ku saabsan nooca beta:
"Tani waxay u ekaan kartaa nooc yar sababtoo ah xajmiga qoraalada, laakiin dhab ahaantii waxaa jira isbeddelo badan oo IDE ah tan iyo nooca 2.3.3. Fadlan ogow, kani waa beta goor hore ah sidaa darteed waxaan durbaba ka warqabnaa arrimaha qaarkood iyo cayayaanka."
Waxaa ka mid ah khaladaadka kuwa la xusay waa kuwan soo socda:
Qaladku ma shaqeeyo.
Nadiifinta kaydka mashruuca ayaa laga yaabaa inuu fashilmo.
IDE -ku wuxuu sudhan yahay marka la koobiyeynaayo qoraal kasta 7 jeer ama ka badan.
Rakibahu ma aasaaso ururada faylka.
Sidoo kale suurtogal ma aha in gacanta laga dhiso ururo fayl.
Waqtigan xaadirka ah, cayaaraha waxaa loo dhisi karaa oo keliya Ubuntu (looguma talagalin aaladaha kale).
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca beta hadda ee Linux waad sahamin kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Wax badan oo ku saabsan GameMaker
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "GameMaker Studio" xiriiriyeyaasha soo socda si toos ah ayaa loo baari karaa:
Casharrada iyo ilaha kale
Marka la soo koobo, sida la arki karo marka ay timaaddo abuurista (kobcinta) Ciyaaraha 2D ee annaga iyo annagaba Nidaamyada Hawlgalka ee Beddelka ah ku saleysan GNU / Linux, maxaa yeelay waxaa jira xalal tiknoolajiyadeed oo hooyo iyo dhinacyo badan leh (Windows iyo MacOS), sida la yaqaan "BennuGD iyo Godot Engine" kuwo kale oo badan oo lacag la'aan ah, furan oo bilaash ah. Si kastaba ha noqotee, sida aag kasta oo ka mid ah Barnaamijka Linux ganacsiyo xiiso leh, kuwo gaar loo leeyahay iyo kuwo kale oo xiran ayaa soo baxaya, sida "Studio -hayaha Ciyaaraha" taas oo ah mid qiimo leh oo adag Ciyaaryahanka IDE 2D, oo hadda loo adeegsan karo GNU / Linux, taas oo ka dhigaysa mid xiiso leh in la soo dejiyo oo la tijaabiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » GameMaker Studio 2: IDE loogu talagalay Ciyaaraha 2D Hadda Loo Heli Karo Linux
TradingView Desktop: Sida loogu rakibo barnaamijkan DeFi GNU / Linux?